Ndụmọdụ njem njem nke Tanzania maka COVID-19 gbanwere
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ndụmọdụ njem njem nke Tanzania maka COVID-19 gbanwere
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Tanzania-ọdụ ụgbọ elu-ụgwọ-1
Tanzania taa mara ọkwa, na ndị njem niile, ma ndị ala ọzọ ma ọ bụ ndị na-alọghachi na-abanye ma ọ bụ na-ahapụ mba ahụ, ga-eme ka nyocha dị mma maka ọrịa COVID-19. Agaghị enwe kwarantaini ga-adị ụbọchị iri na anọ mgbe ha rutere.
Ndị njem niile ma ndị ala ọzọ ma ọ bụ ndị bi na-alọta bụ ndị mba ha ma ọ bụ ụgbọ elu chọrọ ka a nwalee ha maka COVID-19 ma gbanwee echiche ọjọọ, dị ka ọnọdụ maka njem, a ga-eweta akwụkwọ asambodo mgbe ha rutere. Ndị njem si mba ndị ọzọ nwere mgbaàmà na ihe ịrịba ama metụtara ọrịa COVID-19 ga-enweta nyocha dị mma ma nwee ike nwalee maka RT-PCR.
Mgbe ha nọ na mba ahụ, ndị njem mba ụwa niile kwesịrị ịrapara na mgbochi mgbochi ọrịa na usoro nchịkwa dị ka ịdị ọcha aka, itinye ihe mkpuchi, na ịdepụ ahụ dị ka ihe kwesịrị ekwesị.
A choro ka ndi njem nile mejuputa ihe nlere nke ndi njem nke di ugbua ma obu n'uzo ozo obula ma nye ndi isi ike nke Port Port mgbe ha rutere.
Ndị ọ bụla na-abata na ndị na-apụ apụ ga-enyerịrị ozi gbasara ndị njem iji mee ka ndị isi nke ndị nbanye iji nyochaa ihe ngosi maka njirimara ụgbọ njem dị oke egwu.
Onye ọ bụla nọ na Tanzania chọrọ enyemaka ahụike kwesịrị ịkpọ nọmba Mberede Ahụike 199